Ukuvavanya i-Promark3… kuphela iifoto- Geofumadas
NgoJuni, 2010 GPS / Izixhobo
Wadlula ikhosi Ndathetha kubo, Senza iimvavanyo ngeMagellan Promark3 GPS, Iselfowuni iMappa 6. Okubangela umdla, kukuba kwimowudi yoPhando inethiwekhi inokwenziwa, ekuthi emva kokuqhutywa kwayo kwenziwe kungekuphela ngesixhobo esinye. Ngaphantsi kwezi meko, kunokwenzeka ukuba ube nokuchaneka kweesentimitha ezi-2 ngamaxesha amafutshane, ngelixa u-MobileMapper ukwenziwa emva kokuchasene nekhompyuter kuya kuthatha ixesha elininzi ukubamba kwimitha engaphantsi.
Indawo ekhethiweyo yayiyidolophu entle, enomhlaba ongagungqiyo, oqhelekileyo kula mazwe. Emva kokufumana indawo apho ingxolo yobulungisa ingasichaphazela kancinci, saqala inkqubo.
Silibele ukuba bekuyimfuneko ukuba nesidlo sasemini, amakhwenkwe, axineke kakhulu, ngaphandle kwemozulu ephambeneyo, kusuku lokuqala lwesiphepho saseAgatha esibangele iintlekele kumazwe aliqela akuMbindi Merika. Ngendlela endikucebisa ngayo ukuba ubone umonakalo wokujonga umbukeli omiliselwe yiSegeplan ... kulungile, ingakanani baye baqhubela phambili abahlobo ukususela ngexesha lokugqibela Nda zihlola.
Ngaphambi kokuba ndiqale ukuthetha ngeziphumo zobugcisa, ndishiya ezinye iifoto zento engayifaki ingxelo yezobuchwepheshe.
Bangakanani na abaya kundipha kule ntluphelo kwi-eBay ...
... Ndiyafunga ukuba enye yalezi zixhobo isetyenziswe ngumphathi ukuba sijonge kuthi ukuze singayi kubafazi ...
Ndimncede uThixo, njani le nto ... Ndikhumbule ...
ay! Ndikhohliwe kwakhona ...
Yaye loo nto ihlala encinci ...
- ... kwaye ucinga ukuba baya kusihlawula ngale nto?
-mmm ... mhlawumbi baya kusinika isidlo sasemini
-Kodwa sele kubethathu emva kwemini!
Yabona indlela enhle ngayo!
Wonke umntu uya kuzama iPod kwaye asishiye sinyamekele esi siko.
... kwaye kubanda kakhulu.
... yima, ufanele ubone le ntaba njengoko kunjalo.
Wow, le ntambo inde kancinci. Ngubani owaziyo ukuba usebenza ngcono kunebhanti lenkomo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Uphuhliso lwezicelo ze-VBA nge-Microstation
Post Next I-Microstation: indlela yokuprintaOkulandelayo »
2 Uphendula "Ukuvavanya i-Promark3… iifoto kuphela"
Awukwazi; I-6 Mobile Mapper ayixhaseli emva kokuqhutyelwa kwenkqubo, ithetha ukuba ayikwazi ukubamba idatha njenge-rover kwaye ingaba yenze i-post-processed ngokusekelwe kwesinye idivayisi esekelwe kuso.
Ukusuka kumgca weSports Mapper, baxhasa kuphela ukuhlehlisa: I-Mapper Pro yeFowuni, iMapper CX, iMapper 100 kunye neProMark.
Isc Marco Grajales uthi:
Ngomso mva, ndifuna ukwazi ukuba unako ukunceda kum ngaphandle kokungabaza. Khangela, ndinayo i-Promark 3 rtk GPS kunye ne-6 imephu ye-magellan yeselula kwaye ndifuna ukwazi ukuba kukho indlela yokusebenzisa zombini njengesiseko (ngokukhawuleza) kunye ne-browser. Ukuba unako, unganditshela indlela uqwalaselo lwenziwe ngayo